Faahfaahin ka soo baxaysa Taliye ka tirsan ciidamada Puntland oo Gaalkacyo lagu diley – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa Taliye ka tirsan ciidamada Puntland oo Gaalkacyo lagu diley
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dilka Taliyihii ciidamada daraawiishta Puntland ee gobolada Mudug & Cayn G/lle Sare Maxamed Muuse Ilka-dheere, oo goor dhaweyd lagu diley bartamaha magaalada Gaalkacyo.
Taliyaha ayaa la sheegay in uu ku hawlanaa kala qaadista dhinacyadii labadii maalmood ee ugu dambeysay ku dagaalamayey magaalada Gaalkacyo waxaana la sheegay in dilkiisa ay ka dambeysay rasaas ooda ay uga qaadeen koox ka tirsan maleeshiyaadka la dagaalamaya ciidamada Puntland.
Warar SBC ay ka heshay ilo wargal ah ayaa sheegaya in taliye Ilka-dheere xiliga la dilayey uu ku sii socdey dhanka xaafada Garsoor, isla markaana odayaasha deegaankaasi ay u sheegeen in uu aadi karo xaafada Garsoor oo uu kala qaado dhinacyada dagaalmaya, hase yeeshee rasaas ayaa ooda waxaa uga soo qaaday maleeshiyaadka ciidamada maamulka kula dagaalamaya xaafada Garsoor, waxaana sidoo kale dhaawacyo ay ka soo gaareen rasaastaasi ilaalo la socotey taliyaha.
Dilka Taliyaha ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo kulan uu ka socdey xarunta maamulka gobolka halkaasi uu ka socdey kulan ku aadan daminta xiisadaha colaadeed ee ka aloosan magaalada Gaalkacyo, iyadoo kulankan uu yimid ka dib markii baaq nabadeed oo colaada lagu joojinyo ay soo jeediyeen odayaasha deegaanka Garsoor.
Dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqyada ka soo baxaya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo ku baaqaya joojinta xiisadaha colaadeed ee magaalada Gaalkacyo iyo dhiiga bilaa macno la’aanta u qubanaya.
Wixii warar ah ee ku soo kordha xaalada magaalada Gaalkacyo kala soco SBC insha ALAAH.